Airbus dia mamoaka ny fiaramanidina faha-100 A220 novokarina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus dia mamoaka ny fiaramanidina faha-100 A220 novokarina
Novambra 29, 2019
Airbus nankalaza ny fiaramanidina faha-100 A220 novokarina ho an'ny mpanjifa iray nandritra ny lanonana iray tao amin'ny foiben'ny programa fiaramanidina tao Mirabel, Kanada. Ilay fiaramanidina, A220-300, natokana ho an'ny Riga, airBaltic, monina any Latvia, dia manana endrika tranokala vaovao sy ahazoana aina miaraka amina seza 149 miampy livery maoderina.
Ny fianakaviana A220 dia tafangona ao amin'ny Airbus 'Assembly Final Line ao Mirabel ary tato ho ato, ary koa ao amin'ny tsipika fivoriambe faharoa ao amin'ny Mobile, Alabama. A220 voalohany manerantany (nantsoina taloha hoe C Series) dia natolotra tamin'ny volana Jona 2016 ho an'ny mpandraharaha fandefasana A220-100 SWISS.
AirBaltic dia lasa mpandraharaha fandefasana A220-300 rehefa nahazo ny kaoperativa Letoniana voalohany A220-300 telo taona lasa izay, ny 28 Novambra 2016. Nanomboka nandidy indray ny fiaramanidina A220-300 indroa i airBaltic - nitondra ny filaharany hentitra ho 50 fiaramanidina ho lasa mpanjifa E220 lehibe indrindra eropeana ankehitriny. Ny fiaramanidina dia miasa amina fiaramanidina 20 A220-300.
Ao amin'ny tsena mifaninana izaitsizy, ny fahombiazan'ny solika tsy mitovina sy ny fahombiazany tena lehibe dia nanjary fitaovana AirBaltic izay manana fiaramanidina rehetra-A220 ho ivon'ny drafi-pandraharahana vaovao. AirBaltic dia miasa amin'ny fiaramanidina A220 mankany amin'ny toerana maro eropeana sy rosiana ary koa ny afovoany atsinanana. Io dia miasa ny sidina lava indrindra amin'ny sidina A220 - sidina 6.5 ora avy any Riga mankany Abu Dhabi.
Namboarina sy natolotra tamin'ny voalohany ho toy ny Bombardier C Series, ny A220 no hany fiaramanidina namboarina ho an'ny tsena seza 100-150; Izy io dia manome fahombiazan'ny solika tsy hay tohaina sy fampiononana mpandeha an-habakabaka amin'ny fiaramanidina tokana. Ny A220 dia manambatra aerodinamika manara-penitra, fitaovana mandroso ary maotera turbofan an'ny Patt1500G an'ny Pratt & Whitney ho an'ny milina turbofan miisa 20 isan-jato ambany farafahakeliny raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha, miaraka amin'ny emissions ambany indrindra ary fihenan'ny dian-tabataba. Ny A220 dia manolotra ny fahombiazan'ny fiaramanidina mandeha an-tokana lehibe kokoa.
Manakaiky ny 100 A220 no miasa miaraka amina mpandraharaha enina amin'ny kaontinanta efatra. Tamin'ny faran'ny volana oktobra 2019 dia nahazo baiko hentitra 530 avy amin'ny mpanjifa 20 manerantany ny fiaramanidina.
Hotely UK: manomboka amin'ny telovolana farany amin'ny 2019
Nidina ny sidina: nanapoaka ny seranam-piaramanidina Berlin-Schoenefeld ny baomba WWII